Tag: fitadiavana finday | Martech Zone
Alarobia 19, 2015 Alarobia 19, 2015 Douglas Karr
Tsy mampihomehy fa mizara an'ity sary ity izahay tamin'ny andro nitsidihanay ny foiben'ny Bluebridge, sehatra fampiharana finday nomerika. Nanana rindranasa finday tena matanjaka izahay, saingy nivezivezy lavitra ny finday ilay orinasa, ary izao dia mijanona amin'ny rindranasa finday tapaka izahay. Fantatsika fa very ny fandraisana andraikitra sasany amin'ny alàlan'ny tsy fanosehana ny atiny mankany amin'ny lampihazo. Efa nanantena ny hahazo kinova vaovao izahay, ary i Bluebridge manana
Famolavolana mamaly sy ny teboka fitadiavana finday
Ny iray amin'ireo antony nanosika anay hanangana ny tranonkalantsika amin'ny lohahevitra vaovao namboarina ho finday dia tsy ny tabataba rehetra nataon'i Google sy ireo matihanina tamin'ny habaka SEO ihany. Hitanay izany tamin'ny fandinihana ny tranokalan'ny mpanjifanay. Ao amin'ireo mpanjifanay manana tranokala mandray andraikitra, afaka nahita fitomboana be tamin'ny fahatsapana fikarohana finday izahay ary koa fitomboan'ny fitsidihan'ny fikarohana finday. Raha tsy izany ianao
Nandefa momba ireo dingana ilaina izahay mba hialana amin'ny fahaverezan'ny fivezivezena amin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fikarohana finday ao amin'ny Google afaka herinandro manomboka izao. Ireo namanay ao amin'ny gShift dia nijery akaiky ny fanovana ary namoaka lahatsoratra lalina tokoa momba ny fiatraikany amin'ny fiovan'ny algorithm. Mba handrefesana ny fahatsapan'ny mpivarotra sy hanangonana hevitra momba io fanovana lehibe io, ny gShift dia nanao fanadihadiana tamina mpivarotra dizitaly miisa 275 manerana ny indostria isan-karazany ao anatin'izany